Izindawo zokuhlala ezihamba phambili ze-Ski eColorado! - ULLER
NAMUHLA 2X1 EVERYTHING - IKHODI: 2X1YA
Thola isipiliyoni sokushushuluza ezintabeni zaseColorado!
Ukucabanga ngeColorado ukucabanga ngokushushuluza, ukushushuluza nokushushuluza ngaphezulu! Futhi njengoba? Izintaba zayo ezinezitsha zemvelo ezingakholeki kanye nokukhululeka kwawo wonke amazinga ziyamangalisa, futhi zifunwa kakhulu ngabathandi bokushushuluza, ukushibilika eqhweni neminye imidlalo yeqhwa.
Shelelisela phansi emithambekeni yayo ngejubane eligcwelefaka umoya ohlanzekile ukushushuluza eColorado kungumuzwa omangalisayo. Sekuyisipiliyoni esilangazelelwa yizinkulungwane zabavakashi nabasubathi abasivakashela minyaka yonke ukuzwa ijubane le-adrenaline elingenakuqhathaniswa. Ukuphakama kwawo, okuyizindawo eziphakeme kakhulu eRocky Mountains, kufana ne-adventure, okufanele wonke ama-skier abhekane nayo. Ingabe ukulungele ukufunda okwengeziwe ngale ndawo emangalisayo yokushibilika eqhweni? Funda futhi uthole ukuthi isipiliyoni sokushushuluza ezindaweni zokungcebeleka zaseColorado sinjani!
THOLA IZITESHI ZESIKHAYA EZIKHULU KAKHULU E-COLORADO!
I-Aspen yidolobha elisePitkin County esifundeni saseMelika iColorado, elavela njenge-mecca yokushushuluza ngemuva kweMpi Yezwe II lapho kuvela i-Aspen Skiing Company. Eminyakeni edlule, leli dolobha selibe yindawo ebaluleke kakhulu yezemidlalo nemisebenzi yamasiko egxile ekushibilikeni ngokushibilika eqhweni, kanye neminye imidlalo yeqhwa efana ne-snowboarding.
Idolobha lase-Aspen lakhiwa izindawo zokungcebeleka ezine ezingathi, yize zingaxhunyanisiwe, zakha lonke idolobha futhi zikwenze kube enye yezindawo ezinhle kakhulu zokushushuluza eqhweni, kungakhathalekile ukuthi unaliphi izinga lesipiliyoni. Futhi akunandaba ukuthi isabelomali sakho asikho esiphezulu, konke kuzoncika esikhungweni se-ski okhetha ukusivakashela, kanye nesikhathi lapho uya khona. Kukhona okuthile kwawo wonke umuntu kuleli dolobha!
Abahloli bamazwe abaqala nakanjani bazothola indawo yabo ekahle esiteshini se-'Buttermilk 'nengxenye engezansi yesiteshi se-'Snowmass'. Labo abanezinga eliphakathi nokushushuluza eqhweni bazokwenza kahle kakhulu ukuya 'eHighlands' nase 'Snowmass' ezindaweni zabo eziphakeme. Kepha uma usuvele ungumpetha wezindiza oshibhile onamazinga athuthukile, sincoma ukuthi ukhethe Intaba yase-AspenAwukwazi ukudlulisa isitsha esiteshini se-'Highlands 'noma kunjalo. Kepha konke lokhu sizoxoxa ngokuningiliziwe ngokuhamba kwesikhathi!
HLOLA NATHI IZITESHI EZINGCONO KAKHULU ZOKUSEBENZA!
I-Aspen Mountain (Ajax)
I Isiteshi se-Aspen Mountain bekuyisikhungo sokuqala se-ski kuleli dolobha! Sikutholile uetholakala enyakatho yedolobha, futhi kubonakala ngokunikela ngamathrekhi obunzima obukhulu kakhulu kuchwepheshe kakhulu. Empeleni, Intaba yase-Aspen Kuyindawo yokushibilika eqhweni engenawo amathambeka wabaqalayo. Yakhiwe ngemithambeka eminingi yamazinga aphakathi, athuthukile kanye nochwepheshe kuphela, ngakho-ke igcina ngokuba isikhungo se-ski esikhethekile kulo mqondo. Intaba yase-Aspen inengqikithi yamathrekhi angama-76 axhunywe yiwo izinsimbi, futhi isisekelo salo siseduze kakhulu nomuzi uqobo. Isiteshi esimangalisayo sokuhlola amakhono nobuchwepheshe bakho!
I-Aspen - iButtermilk
La isiteshi sebhotela, ngokwengxenye yalo, uma inika imithambeka eluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu, okusho ukuthi "kulula" nokuthi "okuphakathi", okunconyelwe ikakhulukazi ukuqala emhlabeni wokushushuluza, sebenzisa amakhono akho futhi uthokozele yonke i-adrenaline amapayipi(ukukopela amashubhu) kanye iziqhwa zeqhwa (amapaki eqhwa). Idizayini nokuzivumelanisa kwayo kwenza kube isikhungo esijwayeleke kakhulu, nezinketho zabantu abadala nezingane. I- isiteshi sebhotela Siyithola itholakala enyakatho ye-Aspen Highlands, futhi inokuphakama okuncane kakhulu. Kupholile ohambweni lomndeni, awukwazi ukulikhumbula!
I-Aspen - Izindawo eziphakeme
Kutholakala eHighland Peak naseLoge Peak (enyakatho yedolobha), Aspen Highlands Kugqame ukunikela ngokushushuluza ezintabeni okuphezulu ngemithambeka ebomvu nebomnyama (akunconyelwe abalamuli noma abaqalayo). Ivakashelwa kakhulu ngabagibeli abafuna ukuphonsela inselelo imithambeka yayo yemvelo nezitsha ezenzelwe lo mdlalo, kufaka phakathi iHighland Bowl, iOlimpiki Bowl neSteeplechase. Uma okuhlangenwe nakho okwedlulele kuyinto yakho, lokhu ngokungangabazeki indawo ekahle kuwe!
U-Apen - I-Snowmass
Le ndawo yokushibilika eqhweni, uetholakala eduze ne-Snowmass Village, Yiyona enkulu kunazo zonke kuleli dolobha, futhi impela ingenye yezindawo ezidume kakhulu kuyo yonke i-Aspen. Inezinhlobo eziningi kakhulu zamathrekhi ayo yonke imibala kuwo wonke amazinga. Lokhu kuyenza ibe yindawo epholile kakhulu yokushushuluza kuzo zonke izinhlobo zabashushuluza, noma ngabe usaqala noma uvakashela osebenza nabo nomndeni. Kodwa-ke, uthola nemithambeka esezingeni eliphakeme kakhulu ebeka inselelo kulabo abashibilika eqhweni. I- isiteshi se-snowmass Inikeza isimo esihle, izinketho zokulala ezinhle kakhulu, izindawo zokudlela nezitolo ongazithenga. Inakho konke!
Aspen Idizayinelwe ukukhiqiza isipiliyoni esiphelele futhi esiyingqayizivele ngokushushuluza eqhweni, okuyisona siheho sayo esikhulu sezivakashi. Eqinisweni, ukushushuluza kuyo yonke indawo! Ngaphezu kwalokho, kuyindawo eneziteshi zazo zonke izidingo zabavakashi bayo kanye nezizathu zabo zokuhamba (i-adventure, umndeni, ezothando noma ukufunda). Ngaphandle kokungabaza, ungavakashela zonke iziteshi zalo, noma ngabe uzokwazi vele ukuthi yisiphi esifanele wena nabangane bakho! Iqiniso ngukuthi, i-Aspen inhle uma unquma ukuthatha uhambo lokushushuluza uye phesheya eholidini lakho elilandelayo lasebusika. Kwenze!
Ku isiteshi sezintaba zethusi, esentshonalanga neDenver (inhlokodolobha yaseColorado), Imvelo enhle kakhulu ikulindile lapho izivakashi nabantu bendawo bathokozela imisebenzi eminingi eqhweni ngaphezu kokushushuluza, okungasetshenzwa emithambekeni yayo eminingi yayo yonke imibala namazinga. Lapho uzothola amathrekhi angama-77 alula, angama-50 aphakathi nendawo nama-25 anzima wamathrekhi ayi-152 onawo. Izitsha zazo zifunwa kakhulu ochwepheshe abaningi kulo mdlalo, ezakhiwe phakathi kwezintaba ngendlela engokwemvelo, futhi zenzelwe ukuzijabulisa. kwabashushuluza eqhweni, benamathrekhi amaningi, abanyathelwe nabanganyathelwa.
Njengoba itholakala cishe ngamamayela ayi-13 ukusuka eFrisco (eSummit County), ungakhetha izinketho zokuhlala kuleli dolobha eliseduze. Uhlela ukusika isabelomali sakho ohambweni lwakho. IFrisco futhi inezinketho eziningi zokuzijabulisa kwabavakashi okubandakanya iminyuziyamu, izindawo zokuhamba izintaba namapaki eqhwa, ngakho-ke ngeke ube nesithukuthezi. Noma kunjalo, Isiteshi seCopper Mountain Inezindawo zayo zokuzijabulisa, indawo yokuhlala nezindawo zokudlela ezizokushiya ungamangali, zisatshalaliswa ezindaweni ezintathu: i-East Village, iThe Village eCopper naseWest Village.
Khumbula ukunaka ukuthi ukuphakama kwalesi siteshi cishe kungamamitha ayi-3.000 XNUMX, ngakho-ke kufanele ulungiselele ukuthatha lokhu futhi ungakuvumeli ukuthi kususe ubumnandi ohambweni lwakho uma usaqala.
La Isiteshi seWinter Park Resort, "Intandokazi yaseColorado" ithambekele ikakhulukazi emazingeni asezingeni eliphakeme naphakathi okushushuluza, yize inikezela ngezindlela ezilula zomzila wabaqalayo. IWinter Park imi kahle eceleni kwe-Continental Divide ekunikeza ithuba lokuthola nokuhlalisa izivunguvungu zasebusika cishe kuzo zonke izinhlaka. Kusho ukuthini lokhu? Ukuthi bazobambeka lapho futhi bazofaka izingqimba eziningi zeqhwa ukuze bajabulele imithambeka.
Isiteshi, ueseduze neBanga Langaphambili (cishe imizuzu engama-90 ukusuka eDenver), inakho iziqongo ezintathu (iWinter Park, iMary Jane neVasquez Ridge) ezixhumana futhi zixhumane ngemizila namakheshi, ekwazi ukwamukela abantu abangaphezu kuka-10.000 XNUMX ngosuku ngalunye lwe-ski. Ibuye ibe nezindawo eziningi zokuhlala ezinjengezintaba zezivakashi, amahhotela, nezindawo zokuhlobisa amakhondomu ezisukela ezishibhile ziye kwezikanokusho. Ungamangali uma uthola amanye amakamelo namakamelo kufihlwe ehlathini le- EdolobheniIpaki lasebusika!
Ngaphezu kwalokho, njengenani elengeziwe, lesi siteshi siyashintshwa ukuze samukele abantu abacishe bakhubazeke ngokomzimba, abanethuba lokufunda ukushushuluza nokushibilika eqhweni eNational Sports Center for People with Disabilities (NSCD).
IVAIL (VAIL SKI RESORTS)
La Isiteshi sokungcebeleka seVail Ski Kuyinto enkulu kunazo zonke esifundazweni sase Colorado futhi eyesithathu ngobukhulu e-United States yonke. Sayithola itholakala eduze kwedolobha laseVail, e Isifunda sokhozi. Uma uthatha isinqumo sokuvakashela lesi ski resort esihle, ngokungangabazeki kuzoba njalo okunye kokuhlangenwe nakho okumangalisayo kakhulu kweholide ongakhetha kukho. Inikeza cishe yonke into ezigabeni zayo ezintathu: I-Front-Side, Blue Sky Basin, kanye ne-Black Bowls. Isiteshi sinamathrekhi wamazinga athuthukile ingxenye enkulu, futhi ngenxa yalesi sizathu ochwepheshe abaningi be-ski basivakashela, kepha sinikeza izinketho ezinhle kakhulu zabashushuluzi abaphakathi nendawo nabaqalayo abangeke bakudumaze nakancane uma bewuhlobo lwemithambeka.
Ngaphezu kwalokho, yisiteshi esinamadolobha namadolobhana asesiGodini saseVail esinesitayela esihle kakhulu samakholoni ozokuxaka.Futhi uzobona ukuthi uhambo lokuyothenga nempilo yasebusuku lukanokusho ngempela! Okuhle kakhulu ukuthi uthola amakhulu ezinketho zokulala, kufaka phakathi izindlu zamahhotela, amahhotela, izindlu, amakamelo nezindawo zokuhlobisa, ezizovumelana nazo zonke izabelomali nokunambitheka ngenxa yokuhlukahluka kwezinketho, yize kuyiqiniso ukuthi kungaba esinye sezikhungo ski eqolo nxazonke Colorado. Ngakho-ke uma unethuba lokutshala imali futhi ujabulele lokhu kuhlangana kweqhwa, khona-ke ngeke uzisole. Uma une isabelomali Kukhawulelwe, inketho yakho engcono kuzoba ukuhlala emadolobheni aseduze kwesiteshi, okuyindawo ecishe ibe ngamakhilomitha ambalwa ukusuka lapho.
Ubuwazi ukuthi laIVail Town uqobo yakhiwa ngemuva kokuvulwa kwe-ski resort ngo-1962? Kungakho idolobha licishe ligxile ngokuphelele kwezokuvakasha nakubashushuluzi bendawo abavakashela kulo. Ngaphezu kwalokho, i- I-Vail Ski Resort Yakhiwe ezinye iziteshi ezi-3 ezipholile kakhulu, futhi yize zibhekwa njengokuzimela, ziqhutshwa yinkampani yeVail Resorts. Lapha sikushiya imininingwane encane ngabo!
El Indawo yokuhlala i-Beaver Creek Sayithola itholakala kungadluli imizuzu engama-20 ukusuka eVail, eduze kakhulu kwedolobha lase-Avon. Lesi siteshi sifana nokunethezeka ngayo yonke indlela, futhi sisibona sibonakale ezitolo zaso zomkhiqizo, ezobuciko baso ohlangabezana naso ngenkathi uhamba, futhi ngokuvamile kuwo wonke umoya wesiteshi. Lokhu kuyenza ibe enye yezindlela zikanokusho, ezinhle futhi ezikhethekile.
Lesi sikhungo sokushushuluza sincane ngosayizi uma siqhathanisa nezinye izindawo zokungcebeleka ezingomakhelwane, kepha ayinakho ukhululekile futhi ivulekile ngaleso sizathu. Eqinisweni, inentaba ye-ski eyakhiwe ngamadolobhana amathathu ahlukene. Gcina ukhumbula ukuthi iningi lamathrekhi eliwanikezayo elenzelwe amazinga aphakathi, noma linikeza izinketho ezinhle kakhulu zamazinga athuthukile nabaqalayo. Futhi awukwazi ukuphuthelwa i-ice skating rink yayo emangalisayo okuyinto emangalisayo!
IBRECKENRIDGE SKI RESORT
Isiteshi saseBreckenride sibizwa ngokuthi "yiBreck" futhi sinezintaba ezi-5 ezihlanganisa yonke iSummit County eSummit County. Ingesinye sezikhungo ze-ski esivakashelwa kakhulu minyaka yonke e-United States. Futhi ngukuthi isipiliyoni eBreckenridge sinikeza indawo ekahle uma okwakho kungamadolobha amahle, anezindawo zokuhlala zazo zonke izinto ozithandayo nezabelomali.
Kuyindawo ebanzi yeqhwa enamathambeka amaningi emazingeni ochwepheshe, athuthukile naphakathi, yize uthola nemithambeka yabaqalayo abanesikole sokushibilika ukuze bafunde. Ngaphezu kwalokho, ungajabulela amapaki isitayela samahhala kokuzijabulisa okuthe xaxa, ngamabhokisi nojantshi okushelela futhi ugxume ngejubane eligcwele, nalapho ungagijimela kochwepheshe abaziwayo abenza umncintiswano wabo olandelayo.
Le ndawo enhle yokushibilika eqhweni itholakala edolobheni laseKeystone esifundeni saseColorado, eduze kakhulu neDenver. Isikhungo sayo sinezintaba ezi-3 ezilungele ukushushuluza, ikakhulukazi ezinemithambeka yamazinga athuthukile nochwepheshe, yize futhi inikela ngezinketho zamazinga aphakathi nawokuqala. I- isiteshi samatshe angukhiye kumnandi ikakhulukazi ukuvakashela imini nobusuku ngokudumile I-Night Skiing (ukushushuluza ebusuku), ngoba eminye imithambeka yayo ehamba phambili yenzelwe ukushushuluza ebusuku. Kuhle kakhulu!
E-Keystone Resort uthola nezinketho ezinhle maqondana nezindawo zokudlela nezitolo ze-Shopping, kanye nezinkulungwane zezindawo zokulala nezokulala eziqinisekile ukulingana nezinto ozithandayo kanye nesabelomali. Suka ezindaweni ezithokomele kakhulu nezishibhile, uye kumakhondomu asezintabeni kakhulu nasezindlini ezizimele kakhulu.
Futhi, lokhu i-ski resort e-colorado inikeza izindawo zokugibela amahhashi, ipaki yamabhayisikili asezintabeni, izindawo zegalufu nezikhala eziguqulelwe ukunikeza izingqungquthela. Iphinde ibe nechibi eliseduze kude nje ngemizuzu embalwa, okuthi lapho iqhwa liba yi-ice skating rink. Awukwazi ukuwaphuthelwa!
Eyaziwa nangokuthi "I-Basin" noma ngokumane "A-Basin", i- I-Arapahoe Basin ski resort itholakala e-White River National Forest e- Colorado. Liyindawo eyenzelwe ngokukhethekile uchwepheshe wokushushuluza nokushibilika eqhweni, lokhu ngoba ikakhulukazi inikeza imithambeka esezingeni eliphakeme. Kodwa-ke, e-resort uthola izinketho eziphakathi nendawo zama-piste namazinga alula wabaqalayo nabafundi, abathola ngisho nesikole se-ski.
Enye yezinto ozithanda kakhulu ngezindawo zokungcebeleka zeBhesin ukuthi ungakwazi ukushushuluza kuze kube sekuqaleni kukaJuni, okungahlala kuze kube nguJulayi iminyaka ethile. Yingakho ezikhathini eziningi ivula iminyango yayo ubude bezinyanga ezintathu kunezinye iziteshi.
Uma ufuna ukuyivakashela ohambweni lwakho olulandelayo lokushibilika eqhweni, khumbula ukuthi ayinayo indawo yayo yokuhlala, futhi kufanele uhlale eKeystone Resort noma ezindaweni zokuhlala emadolobheni aseduze cishe imizuzu eyi-20 ukusuka endaweni ye-ski, ngokwesibonelo iFrisco, ISilverthorne, uBreckenridge noDillon.
La isiteshi se-loveland useduze kakhulu nedolobha laseGeorgetown ku Colorado, eyakhiwe yiLoveland Valley futhi I-Loveland Basin lokho kokubili baxhuma omunye nomunye uhambo lwebhasi olulodwa ukusuka. I- nabagibeli Abadlulele kakhulu yilabo abavakashela iLoveland kakhulu ngamathrekhi ayo eqhwa angama-400 angenamgwaqo kanye nemithambeka yawo egelezela ezitsheni (izitsha) kuvuliwe. Lokhu kungaba iqhwa kakhulu kunalokho ongakuthola kwezinye izindawo zokungcebeleka ze-ski eColorado.
Ngaphandle kwalokhu, abashushuluzi bokuthwebula bayangena I-Loveland Ezinye izinketho ezipholile, futhi ezinemithambeka, kepha zingaphansi kakhulu, ikakhulukazi endaweni ye- Isigodi saseLoveland. Ngokuvamile lesi ngesinye seziteshi zokuqala ukuvula iminyango yaso onyakeni, ngoba sinikeza izinkathi eziqala ngo-Okthoba kuya kuMeyi.
Kuleli dolobha uzothola izindlela ezinhlobonhlobo zokuhlala, ngezinketho zamahhotela alula kanye nezindlu zokudla zikanokusho ezivumelaniswe nakho konke ukunethezeka. Yize ungakhetha ukuthola indawo yokuhlala efanelekile edolobheni laseGeorgetown.
KHUMBULA: Isikhathi se-ski siphakathi kwezinyanga zikaNovemba no-Ephreli, okuyizinyanga ezinhle kakhulu ukuvakashela izindawo zokungcebeleka eColorado. Futhi khumbula ukuthi ukushushuluza kungumdlalo oyingozi nokuthi kufanele uthathe zonke izinyathelo zokuphepha ezidingekayo.
Njengoba sishilo ekuqaleni kwale bhulogi, zombili izindawo zokungcebeleka zase-Arapahoe Barin naseLoveland yizona ezimbili ezivame ukuvuleka isikhathi eside kunezinye phakathi nonyaka, yize iqiniso lelo kodwa ukuvulwa nokuvalwa kwezikhathi zezulu njalo Kuzoncika ekuphathweni kwesiteshi ngasinye ngokwesimo sezulu. Imvamisa isinqumo sabo senziwa ngokunembile ngokususelwa enanini nasezingeni leqhwa eliwe ngalowo nyaka.
Yimiphi eminye imisebenzi engenziwa eColorado?
Leli dolobha lihle, futhi ligcwele imisebenzi yokuzijabulisa eqinisekile ukugcwalisa uhambo lwakho lokushibilika eqhweni, ikakhulukazi uma uhamba nabangani nomndeni. Ungalusebenzisa lolu hambo lokujabulela ezinye izinsiza futhi uphumule umzimba wakho isikhashana ngemuva kwe-adrenaline eningi eqhweni.
Sebenzisa okunye okuhlangenwe nakho edolobheni laseDenver nasezweni laseColorado ngokujwayelekile. Eminye yemisebenzi emihle yile:
Umnyuziyamu weDenver weSayensi neMvelo
Isithwathwa sigibela izintaba
I-Ice skating emifuleni eqandisiwe
I-Kayaking in Confluence Park
Isikebhe esihamba ngezinyawo iWashington Park
Isifunda se-RiNo ART
Ama-Pubs nezindawo zokudlela
Imihlangano yezemidlalo yamaqembu asekhaya
Uhambo lokushibilika e-Colorado luthembisa ubumnandi obukhulu, inkululeko ne-adrenaline!
Izwe elibizwa ngeCentennial State, entshonalanga neMelika, lingaba nama-blizzards amahle ngenxa yokuphakama kwalo kanye nesimo sezulu, kepha phakathi nezinyanga zikaNovemba kuya ku-Ephreli lithola izinkulungwane zabasiki abafuna ukubukwa kwezikhathi zonyaka zalo ezihlukile nokuhelela kweqhwa.
Khumbula ukuthi ukwenza uhambo lokushibilika eqhweni kufanele uhlale ukulungele kakhulu amazinga okushisa aphansi ngemishini edingekayo futhi ngezingubo ezifanele, kungaba eziphethwe noma eziqashiwe eziteshini. Ngaphezu kwalokho, kufanele kucatshangwe ukuthi imidlalo eyeqisayo eqhweni ibeka ubungozi obuningi bokucatshangelwa. Kubalulekile ukuthi uhlale unolwazi, uzilungiselele futhi ugcine isimo esihle sokuqapha.
Manje njengoba usunolwazi oluthe xaxa mayelana nesipiliyoni sokushushuluza kweColorado, ungakhetha isizini enhle kakhulu bese usebenzisa izidingo zakho. Ngakho-ke ungangabazi futhi uzizwele lolu hambo lokuzijabulisa!
Ukugqoka izifihla-buso ezinhle kuyadingeka lapho uzivivinya imidlalo eyingozi eqhweni. Ngabe ubona sengathi ukulungele ukunqoba ubungozi bemvelo lapho ushibilika eqhweni? Thola ama-5
Imicimbi yezemidlalo eyishumi ephezulu kakhulu nemincintiswano
Thola imincintiswano nemidlalo emihle kakhulu e-Europe nasemhlabeni! Kunezinto eziningi ezidingida izwe emhlabeni, kusukela kwezimanga nokwasekuqaleni, kuya kwezakudala kakhulu,
© 2020 Uller. Wonke Amalungelo Agodliwe